သစ်သားလက်မှုရေးဆွဲခြင်းအတွက်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်နည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / သစ်သားလက်မှုရေးဆွဲခြင်းအတွက်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်နည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-07-10 မူလ:ဆိုက်ကို
အကယ်. သင်သည်သစ်သားလက်မှုရေးဆွဲလိုပါကသစ်သားပစ္စည်းများကိုသင်ပထမ ဦး စွာပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကိုထိုသို့သောလက်ကိုလွှိသု္သရှေု,လက်ကိုင်စွမ်းအင်ကြိတ်စက်,rotary တူ စူး, သင်ကြားခြင်း သငျသညျဟုတ်ပါတယ်, သင်ရွေးချယ်လိမ့်မည်စွယ်စုံပါဝါကိရိယာများဖြတ်တောက်ခြင်း, တူးခြင်းနှင့် polishing စသည်တို့ကိုအဘို့,AMini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကလောင်ထို့အပြင်၎င်း၏သေးငယ်သောပုံသဏ္ about ာန်နှင့်အလင်းရောင်ဖြင့်အ0တ်အထည်များကြောင့်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများWoodworking ကိရိယာများ နှင့်အသေးစားပါဝါကိရိယာများရည်ညွှန်းများအတွက်သစ်သားထွင်းထုပုံစံများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
ROtary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို
ROtary file filding-bits
ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးဖြေ - ထိပ်တန်းသစ်သားလက်မှုပညာကိုသင်လုပ်လိုပါကပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။Uသူတုန်းကစက်တင်ဘာလမှဒီဇင်ဘာလအထိရိတ်သိမ်းသောအပျိုကညာသစ်တောများမှ 100-300 နှစ်အရွယ်သစ်လုံးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ tသူသည်မှတ်တမ်းများကိုမှတ်တမ်းများတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်. Situ တွင်သွေ့ခြောက်သည်။ သစ်များကိုချုံ့ခြင်းနှင့်သစ်လုံးများကို processing site သို့သယ်ယူပို့ဆောင်သည်။အကယ်. သင်သည်သင်၏ဆိအတွက်ရိုးရှင်းသောကစားစရာသို့မဟုတ်သေးငယ်သောယာဉ်များကိုသာပြုလုပ်ပါကအပိုင်းအစဝေါဟာရများဖြစ်သည်အသုံးပြုနိုင်။ ပန်းပုနှင့်ကောင်းမွန်စွာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားသည့်လက်မှုပညာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သစ်သားကစားစရာများသည်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရိုးရှင်းသောသစ်သား Tangram Puzzle ကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါလိမ့်မည်။
အဆင့် 1: သင်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများ
scroll scroll သို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း
သင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှအသုံးပြုရန် template ကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, မင်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆွဲနိုင်တယ်။
အဆင့် 3: ပြုလုပ်ခြင်းtသူbအလိုက်
ပထမ ဦး စွာအပိုင်းအစနှစ်ခုအပိုင်းအစနှစ်ခုကိုယူပြီးနယ်စပ် 1 စင်တီမီတာကိုသူတို့ထဲမှတစ်ခု၏အစွန်းမှ 1 စင်တီမီတာကိုဆွဲပါ။Aကြိမ်မြောက်သူတို့ကိုဖြတ်15 x 15 စင်တီမီတာပုံစံများရဲ့ဖြောင့်လိုင်းများနှင့်အတူ။
အထက်တွင် Tangram ပဟေ to ိလုပ်ရန်အခြေစိုက်စခန်းအဆင့်များဖြစ်သည်။
အဆင့် 4: အပိုင်းပိုင်းအောင်
ယေဘုယျအားဖြင့် t ၏အစွန်းသူအပိုင်းအစများဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ကြမ်းတမ်းသည်, သင်ကိရိယာများသို့မဟုတ်စက္ကူများကိုသဲတူးဖော်ခြင်းဖြင့်ဂရုတစိုက်သဲတူးရန်လိုအပ်သည် ထို့နောက်တောက်ပသောအရောင်ဖြင့်သူတို့ကိုဆေးသုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, အရောင်ကိုသင်ကြိုက်သလောက်အနည်းငယ်တောင့်တသောပုံစံအမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ယခုသင်သည် Tangram ပဟေ for ိအတွက်မူရင်းပုံစံများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆင့် 5: ပြီးပြီ။
Aသစ်သားခြောက်သွေ့သောဆေးများနှင့်ကော်များခြောက်သွေ့သောဆေးများနှင့်ကော်အားလုံးအထိစိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သစ်သားအပိုင်းအစများကိုအောက်ရှိပုံသဏ္ che ာကိုပုံသဏ္ into ာန်ထဲသို့ထည့်ပါ။
စကားမစပ်, သင်ဟာအေးမြသောပုံစံမျိုးစုံကိုကြိုက်လျှင်၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆွဲခြင်းအဖြစ်လုပ်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကောင်းတဲ့အကြံပဲ။
ကွဲပြားခြားနားသောပါဝါ tools တွေကို လက်ကိုင်အာဏာကြိတ်စက် သေးငယ်တဲ့ပါဝါလက်စက် စွယ်စုံပါဝါကိရိယာများ Rotary Hammer Drill Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကလောင် Rotary ဖိုင်လေ့ကျင့်ခန်း bits အသေးစားပါဝါကိရိယာများ အမျိုးမျိုးသောသစ်သားကိရိယာများကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ